Torohevitra momba ny fitsapana A / B amin'ny fanandramana Google Play | Martech Zone
Torohevitra momba ny fitsapana A / B amin'ny fanandramana Google Play
Alatsinainy Oktobra 14, 2019 Alatsinainy Oktobra 14, 2019 David Bell
Ho an'ny mpamorona fampiharana Android, Fanandramana amin'ny Google Play afaka manome fomba fijery sarobidy ary manampy amin'ny fampitomboana ny fametrahana. Ny fihazahana fitsapana A / B voarafitra tsara sy voavolavola tsara dia afaka mampisy fahasamihafana eo amin'ny mpampiasa mametraka ny fampiharana na mpifaninana aminao. Na izany aza, maro ny tranga izay nosedraina tsy araka ny tokony ho izy ny fitsapana. Ireo lesoka ireo dia mety hiasa amin'ny fampiharana ary handratra ny zava-bitany.
Ity misy torolàlana amin'ny fampiasana Fanandramana amin'ny Google Play ho an'ny A / B fitiliana.
Mametraka fanandramana Google Play
Azonao atao ny miditra amin'ny console an'ny Experiment avy ao anaty dashboard an'ny Google Play Developer Console. Mandeha Fanatrehana fivarotana eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery ary safidio Fanandramana lisitry ny fivarotana. Avy any, azonao atao ny misafidy ny "New Experiment" ary manangana ny andranao.
Misy karazana andrana roa azonao atao: Fanandramana sary an-tsary ary Fanandramana eo an-toerana. Ny fanandramana sary an-tsary dia hanafaka fitsapana any amin'ny faritra misy ny fiteny nofidinao ho default anao ihany. Ny fanandramana eo an-toerana kosa dia hanao ny andranao amin'ny faritra misy ny fampiharana anao.
Ny teo aloha dia mamela anao hizaha singa mamorona toa ny sary masina sy ny pikantsary, raha ity farany kosa dia mamela anao hizaha ny famaritanao fohy sy lava ihany koa.
Rehefa misafidy ireo karazana andranao, dia tadidio fa arakaraka ny isan'ny fisedrana anao no maharitra kokoa ny fotoana ahazoana valiny azo zahana. Ny variants be loatra dia mety miteraka fitsapana mila fotoana sy fifamoivoizana bebe kokoa hananganana elanelam-pahatokisana izay mamaritra ny mety ho fiovan'ny fiovam-po.
Fahafantarana ny valin'ny fanandramana
Rehefa mihazakazaka fitsapana ianao dia afaka mandrefy ny valiny mifototra amin'ireo mpiorina amin'ny fotoana voalohany na mpiorina mitazona (iray andro). Ireo mpiorina amin'ny fotoana voalohany dia ny fiovam-po tanteraka mifamatotra amin'ny variant, miaraka amin'ny Retain Installers ho mpampiasa nitandrina ny fampiharana aorian'ny andro voalohany.
Ny console koa dia manome fampahalalana momba ny amin'izao fotoana izao (mpampiasa izay nametraka ny rindrambaiko) sy Scaled (firy ny fametahana mety ho azonao avelanao raha nahazo 100% ny fifamoivoizana nandritra ny vanim-potoana fitsapana).
Ny 90% Confidence Interval dia namboarina taorian'ny nihazakazahana nandritra ny fotoana lava ny fitsapana mba hahazoana fomba fijery azo trandrahana. Izy io dia mampiseho bara mena / maitso izay manondro ny fomba hanitsiana ny fiovam-po raha toa ka nipetraka mivantana ilay variant. Raha maitso ny bara, fiovana tsara izany, mena raha ratsy izy io, ary / na ny loko roa dia midika izany fa mety hitifitra amin'ny lafiny roa izy.
Fomba fanao tsara indrindra hodinihina amin'ny fitsapana A / B ao amin'ny Google Play
Rehefa mihazakazaka ny fitsapana A / B anao ianao dia te hiandry mandra-pahatongan'ny elanelan'ny fahatokisana alohan'ny hanaovana fehin-kevitra. Ny fametrahana isaky ny variant dia afaka miova mandritra ny fizotran'ny fanandramana, ka raha tsy mihazakazaka maharitra ny fitsapana mba hametrahana haavon'ny fahatokisan-tena dia mety hiova ny fomba fiasa hafa rehefa ampiharina mivantana.
Raha tsy ampy ny fifamoivoizana hametrahana elanelam-pahatokisana dia azonao atao ny mampitaha ny fironana amin'ny fiovam-po isan-kerinandro mba hahitana raha misy tsy fitovizany mipoitra.
Ianao koa dia te-hanaraka ny fiantraikany aorian'ny fametrahana. Na dia milaza aza ny Confidence Interval fa ny variantin'ny fanandramana dia ho nahavita tsara kokoa, ny tena zava-bitan'izy ireo dia mety mbola tsy hitovizany, indrindra raha misy elanelana mena sy maitso.
Aorian'ny fampiasa ny karazana fitsapana dia manara-maso ireo fiheverana ary jereo ny fiantraikan'izy ireo. Ny tena fiantraikany dia mety ho hafa noho ny voalaza mialoha.
Raha vantany vao voafaritrao hoe inona no mahomby indrindra amin'ireo variana, dia te-hamerina sy hanavao izany ianao. Anisan'ny tanjon'ny fitsapana A / B ny fitadiavana fomba vaovao hanatsarana. Rehefa avy mianatra izay mandeha dia afaka mamorona variant vaovao mitazona ny valiny ao an-tsaina ianao.
Ohatra, rehefa niara-niasa tamin'ny AVIS, Gummicube dia nandalo andrana maromaro tamin'ny fitsapana A / B. Izany dia nanampy tamin'ny famaritana izay singa mamorona sy fandefasan-kafatra mpampiasa tsara indrindra niova fo. Io fomba fiasa io dia nahitana fiakarana 28% amin'ny fiovam-po avy amin'ireo fanandramana sary niavaka fotsiny.
Iteration dia zava-dehibe amin'ny fitomboan'ny fampiharana anao. Manampy anao amin'ny famerenana hatrany ny dianao miovaova izany rehefa mihalehibe ny ezaka ataonao.
Ny fitsapana A / B dia mety ho fomba tsara hanatsarana ny fampiharana sy ny ankapobeny Optimization App Store. Rehefa mametraka ny andranao ianao dia ataovy izay hamerana ny isan'ny variana andranao indray mandeha mba hanafainganana ny valin'ny fitsapana.
Mandritra ny andrana dia araho maso ny fiantraikan'ny fametrahana anao sy ny asehon'ny Confidence Interval. Arakaraka ny isan'ny mpampiasa mahita ny fampiharana anao no mahabe ny vintanao amin'ny fametrahana fironana tsy miova izay manamarina ny valiny.
Farany, te-hitohy foana ianao. Ny fanitsiana tsirairay dia afaka manampy anao hianatra izay manova ny mpampiasa indrindra, amin'izay ianao hahafantatra tsara ny fomba hanatsarana ny fampiharana sy ny refy. Amin'ny alàlan'ny fanatontosana fomba fitiliana amin'ny fanandramana A / B, ny mpandrindra dia afaka miasa manatsara ny fampiharana azy ireo lavitra kokoa.
Tags: Fanandramana sary an-tsarygoogle playGoogle Play Developer ConsolegummicubeFanandramana eo an-toeranafanandramana vaovaompiorina mitazonaFanatrehana fivarotana
Dave Bell dia mpandraharaha ary mpisava lalana ekena amin'ny sehatry ny fialamboly amin'ny finday sy ny fizarana atiny nomerika. Dave dia mpiara-manorina & CEO an'ny Gummicube - mpamatsy data, teknolojia ary serivisy ho an'ny App Store Optimization.
Manomboha ny fanentanana amin'ny fivarotana horonantsary amin'ny fomba 3
RFP360: Teknolojia mipoitra hialana amin'ny fanaintainan'ny RFP